How To Make Money Online Free and Easy (Online ၀င်ငွေရှာနည်း) ~ IT Guide Myanmar
7:22 AM အွန်းလိုင်းနှင့်ငွေရှာနည်း4comments
Paypal account ဖွင့်နည်း
ကျွန်တော်တို့ Myanmar နိုင်ငံ ကနေ Paypal Account ဖွင့်မယ်ဆိုရင် Proxy ကျော်မှ ဖွင့် လို့ရပါတယ်။
Proxy ကျော်ဖို့ အတွက် Your Freedom software ကို သုံးပါမယ်။
Your Freedom software ကို သုံးဖို့ အတွက် yourfreedom.net မှာ အရင် Register လုပ်ရပါမယ်။
1) ဒီLink ကိုနှိပ်ပါ။
2) click here to register ကို နှိပ်ပါ။
3) မျှား ပြထားတာ အကုန် ဖြည့် လိုက်ပါ။
( 4) သည်အဆင့်ရောက်ရင် မိမိ register လုပ်ထားတဲ့ Gmail ထကိုသွားပါ။
5) click the link
6) click the link
7) click the activate account button
8) Login ၀င်လိုက်ပါ
Latest version ကိုနှိပ်ပါ
( 9) download ပြီးသွားရင် စက်ထဲမှာ install လုပ်ပါ။
Myanmar version ပါ။ Language မှာ Myanmar လို့ ထားလိုက်ပါ။
Your freedom အသုံးပြုပုံ သိချင်ရင် အောက်က link ကို နှိပ် လိုက်ပါ။
10) firefox မှာဆိုရင် Option > Network > Setting ပြီရင် ပုံမှာပြတဲ့ အတိုင်း ထားပြီး Ok နှိပ်လိုက်ပါ။
11) ဒီLink ကိုသွား myanmar နေရာ သင်တို့ရွေးထားတဲ့
Uk or Us or something ဖြစ်နေပါလိမ့် မယ်
12) Paypal account ဖွင့် လိုရပါ ပြီ။ Link ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
13) Signup ကို နှိပ်လိုက် ပါ။
country နေရာမှာ ကြိုက် တာထားပါ။ get started ကို နှိပ်ပါ။
14) ဒီ အဆင့် က အရေးကြီးပါတယ်။ user name, email, တို့ က ကြိုက်တာဖြည့်လို့ရပေမယ့် Address , state ,postal code etc ...... မှားလို့ မရပါဘူး။ မှားလျှင် paypal က account ကို limited လုပ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ လိုမဖြစ်အောင် ကျွန်တော် ပြောတဲ့အတိုင်း တိတိ ကျကျ လုပ်ပေးပါ။
ကဲဒီ link ကိုတစ်ချက် နှိပ်ပေးပါ။
Paypal မှာရွေး ထားတဲ့ country ကိုရွေး ပြီးတော့ generate လုပ်လိုက်ပါ။
ဒါမျိုးတွေရ ပါလိမ့် မယ်။
Copy ကူး ပြီး paypal registaration ဖြည့် လိုက်ပါ ။Ph no က အစ သူ့ ဟာ ပဲထည့်ပါ။
ဒီ အဆင့် ရောက် ရင် credit care ရှိရင်ဖြည့်လိုက်ပါ ။ မရှိရင် go to my account ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Finished Your Paypal Registeration
မှတ်ချက် paypal သုံးတိုင်း yourfreedom သုံးပါ။
မရရင် aungkyawzaw.makemoney@gmail.com ကို ဆက်သွယ် ပါ
24 နာရီ အတွင်းဖြေပေးမယ်။
paypal account ပိုက်ဆံ ထုတ်ချင် ၊ ထည့်ချင် ရင်
www.shwemoney.com ဆိုတာရှိတယ်။ph 01-510554
Posted 16th April by Aung Kyaw Zaw
အင်တာနက်မှာပိုက်ဆံရှာနည်း မြောက်များစွာရှိပါတယ်။ အခုပြောမှာကတော့ (PTC) အကြောင်း ပါ၊
PTC ဆိုက်ဆိုတာ ဘာ လဲဆိုတာကို သိအောင် ဒီမှာ ရှင်းပြမယ်၊ (PTC = Paid To Click) မြန်မာလိုဘာ သာ ပြန်ရင် ကလစ်နှိပ်ရင် ပိုက်ဆံပေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ PTC Website တွေ စတင်ပေါ်ပေါက် လာတာကတော့ 2007-2008 ကတည်းကပါ။ အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ Website တွေအများ ကြီးရှိပါတယ်၊ အဲဒိ Website ကုမ္မဏီတွေ က သူ တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းမှာ ရှိတဲ့ လူတွေကို ကြော်ငြာ ချင်ကြပါတယ်၊ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး နည်းကတော့ နေ့စဉ် လူကုဋ္ဋေ ပေါင်းများစွာ ကျင်လည်ကျက်စားနေတဲ့Online ဈေး ကွက်မှာ ကြော်ငြာ ခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်းမှာလဲ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့Product ကို သူတို့ ကိုပိုင် Website မှာ တင်ရောင်းရုံ ကြော်ငြာတင် ရုံနဲ့တင် အဆင်မပြေကြပြန်ဘူး။ပြသာနာက ဘယ်သူကသူတို့ Website ကို ၀င်ကြည့်မှာလဲ၊ Website တင်တိုင်းလဲ လူဝင်ကြည့်တာမှမဟုတ်တာ၊ အဲ့ဒိတော့ ကြော်ငြာ
နဲ့ပက်သက်လို့ ဖြေရှင်းချက်တွေကိုရှာ တော့ နေ့စဉ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူအသုံး အများဆုံး ဖြစ်တဲ့ Google, Yahoo, Bing, Facebook, အခြားဆိုရှယ် ဆိုက်တစ်ချို့ ကို တွေ့သွားပါတယ်၊ အဲ့ဒိ Social ဆိုက်တချို့ရဲ့ Home Page မှာ သူတို့ရဲ့ ကြော်ငြာကို တင်ထားလိုက် ရင် သူတို့ ရဲ့ ကြော်ငြာ ကိုနေ့စဉ် လူပေါင်း ကုဋ္ဋေနဲ့ချီပြီး တွေ့တော့ မယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ အဲ့ဒိ Social ဆိုက်တွေနဲ့ စာချုပ်တွေချုပ် ငွေတွေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ပေးပြီးသူတို့ ရဲ့ကြော်ငြာတွေကို စတင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒိလိုနဲ့ပဲ နာမည်ကြီးတဲ့ Socialဆိုက်တွေမှာ ကြော်ငြာတွေကို ပုံနဲ့ တစ်မျိုး စာနဲ့တစ်မျိုး ၀င်ရောက်ကြော်ငြာလာကြ တော့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြော်ငြာတဲ့ ကုမ္မဏီ တွေထဲက တစ်ချို့ ကထင်သလာက်ခရီးမပေါက်ကြပါဘူး၊ အဲ့ဒိလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဖို့ အတွက် PTC Website တစ်ချို့ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်၊ PTC ဆိုက်တွေက ကုမ္မဏီတွေကနေ သင့်သင့်တဲ့ငွေပမာဏ နဲ့ ကြော်ငြာတွေကို လက်ခံပါတယ်၊ အဲ့ဒိ ကုမ္မဏီကကြော်ငြာတွေကို လူတစ်ထောင်ကြည့် ရင် $5 မှ $10 အထိ အခကျေးငွေယူပြီး သူတို့ ၀က်ဆိုက်တွေမှာ ကြော်ငြာတင်ပေးကြပါတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့က ကြော်ငြာ ကြည့်မယ့်လူ (Member) ရှာပါတယ်၊ အဲ့ဒီ့ ကြော်ငြာ ကြည့်မယ့်လူတွေကို အယောက် တစ်ထောင်ကို $2 မှ $5 အထိပေးပြီးဝင်ကြည့်ခိုင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကြော်ငြာ ကြည့်တဲ့လူ (Member) တွေက5စက္ကန့်မှ 10စက္ကန့် အထိအတိအကျ ကြည့်ပေးရပါ တယ် ၊ ဒီလိုနည်းနဲ့ PTC ဆိုက်တွေက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နေရာရလာကြပါတယ်၊ ကြော်ငြာ တဲ့သူကလည်း သူ့ကြော်ငြာကို လူတွေသေချာကြည့်တဲ့အတွက် ကျေနပ်သလို၊ ကြော်ငြာ လက်ခံတဲ့ Website ကလည်း အမြတ်ရတော့ ကျေနပ်ကြပါတယ်၊ အဲ ကြော်ငြာ ကြည့်ပြီး ပိုက်ဆံရှာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ (Member) အနေနဲ့ ကလည်း ကျေနပ်မူရှိပါတယ်၊ ဒါက PTC Website တွေရဲ့ ဖြစ်တည်မူပါပဲ။
ကျွန်တော် အထူးသတိပေးချင် တာက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ PTC Website ၁၅၀.၀၀၀ ကျော်ကျော် ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ပိုက်ဆံ ပေးတဲ့ဆိုက်က အတော့ကို နည်းပါတယ်။ နောက်ပြီး Internet ဆိုတာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဆိုဒ် အမှန်တကယ်ရိုးသားပြီး ပြောရင် ပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ် တဲ့ဆိုဒ်များအတော်ကိုရှားပါတယ်။ (Internet Is Full of Scam) ကျွန်တော် ပြောတာ ကို မယုံရင်လဲ ကို့ဟာကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အခွင့်အရေး ရှာနေတဲ့သူတွေက PTC Website အတုတွေ ဖွင့် တယ်။ ခင်ဗျား တို့ဆီက ၀င်ကြေး တောင်းလိမ့်မယ် ပြီးရင် ပြောက်သွားရော၊ တစ်ချို့ ပိုလို့တောင်ဆိုးသေးတယ်၊ ခင်ဗျား ကို သုံး လလောက်အလုပ်ခိုင်းပြီး ပြီးရင် ခင်ဗျား ငွေလဲထုတ်ရော ခင်ဗျားကို ဘာ မှ အကြောင်း မပြန်တော့ဘူး၊ အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်တော် အ ကြံပြုချင်တာက ကျွန်တော် ပြော တဲ့ဆိုက်တွေကို အရင်လုပ်ပါ။ အတိအကျလေ့လာ ပြီး နှစ်အတော် ကြာပြသာနာ မရှိတဲ့ဆိုက်တွေကို ကျွန်တော် တင်ပြထား တာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကို့ပါကို လေ့လာချင်ရင် လဲ သဘော ပါ သတိထား ပါလို့ပဲ ပြော ပါရစေ။
ဒီမှာ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ပြော ချင်တာက တော့၊ PTC Website တွေဟာ အစမှာ ငွေနည်းနည်း ပဲဝင်ပါတယ်၊ Site တစ်ခု ကို တစ်လ$1.5 နေ $2 အထိပဲ ၀င်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ Site 5ခု မှ 10ခု လောက် ချိတ်ထားနိုင်ရင် တော့ တစ်လ $15 - $20 ၀န်းကျင်ရပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ကို မိနစ် 20 ထက်ပိုပြီး အလုပ်လုပ်စရာ မလိုပါဘူး၊ PTC ဆိုက်ရဲ့ သဘောက လွယ် တယ်၊ လက်ချောင်းတစ်ချောင်း ရှိရင် အလုပ်လုပ်လို့ရ တယ် ဒါပေမဲ့ ငွေဖြည်းဖြည်း ချင်းပဲရှာ လို့ရမယ်။ တစ်လမှ $20 ထဲဆိုလို့ စိတ်မညစ်သွားပါနဲ့ ၊ ကျွန်တော် တို့ ဆိုက်ရဲ့ငွေရှာ ဖွေရေး အစီအစဉ် တွေရဲ့ ပထမအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်၊ ၀င်ငွေ တိုးအောင် လုပ်တဲ့ နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော် PTC Website တွေ နဲ့ ပိုက်ဆံ ရှာနေတာ (၄) နှစ်ကျော် နေပါပြီ။
အခု ကျွန်တော့ PTC Website တွေ ရဲ့ ၀င်ငွေဟာ တစ်ရက် $200 ($200/Day) ၀န်းကျင်ရှိပါတယ်။ တစ်နှစ် ဆိုရင် $80,000 ($80,000/year) ရှိပါတယ်။ အမြတ် သီးသန့်တွက်မည် ဆိုပါက တစ်နှစ် $60,000 ကျော်ကျော် ရှိပါတယ်။ သည်အခြေအနေ ရောက်ဖို့ ကျွန်တော့ အိပ်ကပ်ထဲက ပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှ မဆိုက်ခဲ့ ပါဘူး။ ဆိုက်ချင်လဲ ဆိုက်လို့မရခဲ့ဘူးလေ။ အဒီတုန်းက Paypal Account လဲ မဖွင့်တတ်ခဲ့ဘူးလေ။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် PTC Account ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံ တောင် ဘယ်လိုထုတ် ရမယ်မှန်း သိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ အခုပြန်တွေးကြည့်ရင်ကောင်းတယ်လို့တောင်ထင်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ပိုက်ဆံ ထုတ်မရတော့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံကို PTC Siteတွေမှာ Referral (PTC ရဲ့အသက် ဟာ Referral လို့ပဲ မှတ်ထာပေးပါ၊ Referral အကြောင်းကို အောက်မှာ ရှင်းပြပါမယ်) တွေ ၀ယ်ပြီးရင်းဝယ်ရင်းနဲ့ပဲ အခု သည်လောက် ၀င်ငွေ ရလာတာပါ။ ခင်ဗျား တို့လည်း စအလုပ်လုပ်ပြီး တစ်နှစ်လောက် ကြာရင် တစ်နှစ်ကို$8,000 ၀န်းကျင်လောက် ရနေပါပြီ။ ပိုက်ဆံကို မထုတ် ပဲ နှင့် ဆက်ရင်းသွားရင်တော့ ၃ နှစ်လောက်နေရင် အနည်းဆုံး တစ်နှစ် $60,000 လောက် ရမှာပါ။ အဲဒိ အချိန်ရောက် လျှင်တော့ ထုတ်ပြီးရင်း ထုတ်ပေါ့ ။ ကျွန်တော့လည်း မမေ့ နဲ့ပေါ့။
PTC Website တော်တော် များများ ကတော့ တစ်ပါတ် တစ်ကြီမ် Cashout/Withdraw လုပ်လို့ရပါ တယ်။
Minimum Cashout/Withdraw = $2
Maximum Cashout/Withdeaw = No
Cashout/Withdraw Period = one time/ week
Cashout/Withdraw Fees = 3% to 5%
PTC Website တိုင်းမှာ သူ့စည်းကမ်းနဲ့သူရှိပါတယ်။၄င်းစည်းကမ်းများကိုမလိုက်နာရင်တော့ ကိုယ့်အကောင့်ကိုယာယီထိန်းသိမ်းခြင်းသော်လည်းကောင်း၊အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း သော်လည်းကောင်း အရေးယူခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်
တွေဟာအိမ်ကနေပိုက်ဆံရှာဖို့လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို အကောင့်တစ်ခုပဲလုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ တစ်ခုထက်ပိုသော အကောင့်များကို ယာယီပိတ်ပစ်ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်ပစ်ခြင်းသော်လည်းကောင်း လုပ်ခံရနိုင်ပါတယ်။
စည်းကမ်းချက်များထဲမှာ အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်များမှ အသုံးပြုခြင်းကိုလက်မခံ သော်လည်း တကယ်တမ်း သုံးလို့ရပါတယ်။ အဒိComputer တွေမှာ Account မဖွင့်ထားဘူး ဆိုရင် ရပါတယ်။
login ဝင်ဖို့ proxy သုံးနိုင်သော်လည်း ကြော်ငြာကြည့်ဖို့ အသုံးပြုခြင်းလက်မခံပါ။
၄င်းဟာ ဘာကိုညွှန်းတာလဲဆိုတော့ ဥပမာ ကိုယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေ အကောင့်လုပ် နှိပ်နေတယ်။ နိုင်ငံခြား ရောက်သွားရင်လည်း ဒီဆိုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့သဘောပါ။ ဒါကြောင့်လက်ခံတာပါ။ ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံဟာ အိုင်ပီနံပါတ်များမတူသလို အချိန်များလည်း မတူညီကြပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ကနေ ပိုက်ဆံ ထုတ် ပြီဆိုရင်တော့ proxy ကျော်ကိုကျော်ရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Cyber Banking ဖြစ်တဲ့ Paypal က ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ IP address နဲ့ ခွင့်မှ မပြုတာ။
(အောက်မှာ Paypal Account ဖွင့် နည်း နှင့် မိမိ လက်ထဲ ပိုက်ဆံ ရအောင်ထုတ် နည်းကို ပြည့်ပြည့် စုံစုံ ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။)
အလိုအလျောက်နှိပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုခြင်းကို လက်မခံခြင်း
အချို့သော ကိုယ်တိုင်နှိပ်ရမှာပျင်းတဲ့သူများက အလိုအလျောက်နှိပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲများကို အသုံးပြုကြပါ တယ်။ ထိုသို့အသုံးပြုခြင်းကိုPTC Website များက လက်မခံပါဘူး။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိက အရေးယူခြင်းခံရမှာပါ။
အွန်လိုင်းမှာ ငွေချေခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း စသည်များကို ခြားခံအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့Cyber Banking Website များရှိပါတယ်။ eg : Paypal, Payza or Alertpay, Neteller, Egopay, libertyreserve etc.....
ကျွန်တော် ကတော့ Paypal ပဲ အသုံးပြုပါ လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
(Paypal Account ဖွင်းနည်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ Post တင်ပေးထားပါသည်။)
ငွေကို လက်ထဲရောက်အောင် ဘယ်လိုထုတ်မလဲ (မသိသောသူများ အတွက်သာ)
အရင် ဦဆုံး Paypal မှာ Sign Up လုပ်လိုက်ပါ။ Cyber Banking အကျိုးဆောင် company များနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ www.shwemoney.com တာရှိပါတယ်။ မြန်မာ Website ပါ။ Online Banking System အကျိုးဆောင်Companyပါ။ ငွေလွှဲ ခ ကတော့ လွှဲငွေ၏ ၅% ပါ။
Ph : 01-510-554
Address : No (9), Shin Saw Pu Pagoda Street(near city mark) Sanchaung Township
Email : support@shwemoney.com
မှက်ချက်။ ။signup လုပ်ချိန်တွင် Paypal email နေရာတွင် အဆင်ပြေတဲ့ email တစ်ခုခု (သို့) ကွပ်လပ် အတိုင်း ထားလို့ရပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့အချိန် ပြင်လို့ ရပါတယ်။
NEOBUX ပါကြော်ငြာ ကြည့်ငွေရှာ ဆိုက်ပါပဲ၊ ငွေပေးတိကျတယ်၊ သက်တမ်းရင့်တယ်၊ အရှုပ်အရှင်းကင်းတယ်၊ မကြည့် ပဲဝင်းဒိုးသေးသေးလေးမှာပဲ ဖွင့်ထားလို့ရတယ်၊ အထူးအချက်ကတော့ PTC သုံးသူတိုင်း သူတို့ကို ကြိုက်တယ်၊ အကောင့်ဖွင့်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်၊
PROBUX ပါကြော်ငြာ ကြည့်ငွေရှာ ဆိုက်ပါပဲ၊ ငွေပေးတိကျတယ်၊ အရှုပ်အရှင်းကင်းတယ်၊ Neobux ထက်တောင်ငွေ ပိုပေးတယ်၊ လူကြိုက်များတယ်၊အကောင့်ဖွင့်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်၊
ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေကို ရွေးပြီးနှိပ်ပေးရတဲ့ ဆိုဒ်ကလေးပါ
သေချာတယ်၊ တိကျတယ်၊ နာမည်ကောင်းရထားတဲ့ဆိုက်ပဲ၊ အဲ့ဒီ့ဆိုက်ကို ၀င်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်
(အရုပ် ၆ ခုပေးထားတဲ့အထဲက ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့အရုပ်ကို ရွေးပြီးနှိပ်ရတဲ့ ဆိုက်လေးပါ)
(5) The Bux
PTC registering ကို NEOBUX နှင့် ဥပမာပေး ပြီး ရှင်းပြ ပါ မယ်။
Paypal Email နေရာမှာ ကြိုက်တဲ့ email ဖြည့်လို့ ရပါတယ်။ အချိန်မရွေး ပြောင်းလို့ ရတယ်။ Paypal Account လည်း ဖွင့်စရာမလိုသေးပါဘူး။ Cash out လုပ်တဲ့အချိန်ရောက် မှ PaypalAccount ဖွင့်လည်းရပါတယ်။
အထပ်ပါပုံမျိုးတွေ့ရပါက Neobux က သင့်ရဲ့ အီးမေးလိပ်စာကို စာပို့လိုက်ပါပြီ၊ အဲ့ဒီ့စာထဲမှာ Validation code ပါထည့်ပေးလိုက်တယ်၊ အဲ့ဒီ့ကုတ်ကိုကူးပြီး အထပ်ပါပုံရဲ့ မြှား ပြထားတဲ့နေရာမှာထည့်ပေးရမယ်၊ (ပုံမှန်အားဖြင့် Neobux မှပေးပို့သောစာများဟာ သင့်အီးမေးရဲ့ Inbox ထဲမှာမရှိတတ်ပဲ Spam box ထဲရောက်နေတတ်ပါတယ်၊ Spam box မှာရှာပါ၊) အောက်ပါပုံမှာဥပမာပြထားပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ neobux register လုပ်ခြင်းအစီအစဉ် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးပါပြီ
ကဲ login သာ လုပ်လိုက် ပါတော့......
Secondary Password က မသုံးလဲ ရပါတယ်။
Neobux ဝင်ငွေရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
(1) Home page မှာ View Advertisements ကိုနှိပ်ပါ။
(2) ကြော်ငြာ Link တွေ ကို click ပါ။ ( Red, Green , Orange) စသည့်အရောင်တွေ နှင့် တွေရပါ လိမ့် မယ်။ ကျွန်တော် က နှိပ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ ပါ။
(3) အနီရောင် အစက်လေး ကို နှိပ်လိုက်ပါ
(4) Close ကို Click လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကြော်ငြာ တစ်ခု ကြည်လို့ ပြီး သွားပါပြီ။
ကြော်ငြာအားလုံး ကုန်အောင် ကြည့် လိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးသွား ရင် User name ပေါ်နေတဲ့ နေရာ မှာ click နှိပ်လိုက်ပါ။ ခင်ဗျား တို့ရထားတဲ့ ပိုက်ဆံ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
NEOBUX ကို example ပေးပြီး ပါ ပြီ။ ကျန်တာတွေလဲ ထိုနည်း၎င်း ပါဘဲ ။ PTC site တွေအများကြီးပါ ကြိုက်တာကို စမ်းကြည့် ပါ။ But register မလုပ်ခင်တော့ Forum တို့ Payment Proofတို့ကို အရင်ကြည့်ပါ....... Good luck EVERYBODY
နားမလည်ရင် ၊ အကူညီ လိုရင် ကျွန်တော့ ဆီဆက်သွယ်ပါ။
aungkyawzaw.makemoney@gmail.com 24 နာရီ အတွင်း အကြောင်းပြန်ပေးမယ်။
PTC Strategy Guide (OR) ၀င်ငွေတိုးအောင် လုပ်နည်း
သည် အကြောင်းကိုပြောတော့ မယ်ဆိုရင် Referral အကြောင်း မှ စပြောမှ ရမှာပါ။
Referral မှာ Direct Referral နှင့် Rental Referral ဆိုပြီး နှစ်ခု ရှိတယ်။
Direct Referral ကတော့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အကောင့်နဲ့ အခြားသူများကို ညွှန်းပြီး အကောင့်လုပ်ကြော်ငြာကြည့်ခိုင်းခြင်းဖြင့် ၄င်း နှိပ်သောသူများထဲကမှ တစ်ဝက်ကို ကိုယ်ကရရှိ တာကိုပြောတာပါ။ တစ်နည်းပြောရရင် ကိုယ်က Sponsor လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် ခင်ဗျားတို့ အပေါ်က ကျွန်တော်ပေး ထားတဲ့ Link ကနေ Register လုပ်လိုက်တယ် ဆိုပါတော့။ ခင်ဗျား တို့သည် ကျွန်တော့ ရဲ့ Downline မှာရှိတယ်။ သည်တော့ Sponsor ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် က ခင်ဗျားတို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံ ရဲ့ 50% ကို ရပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ Downline မှာရှိ တဲ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ direct referral (သို့) rental referral တွေ ရဲ့ % ကိုတော့ ကျွန်တော် မရပါဘူး။
ခင်ဗျားတို့ register လုပ်ထားတဲ့ PTC site ရဲ့ Direct referral Link ကို လိုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Banner or Your refer link or Home page ထဲ မှာ ပြထားတတ်ပါ တယ်။
ဥပမာ အားဖြင့် http://www.neobux.com/?r=usernamexxxx (or) http://www.neobux.com/?rh=61756E676B7961777A6177373739 မျိုးပါ။
Direct Referral ရဖို့ နည်း လမ်းတွေ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောလိုတောင် ကုန် မှာမဟုတ်ဘူး တစ်ချို့တွေ က Internet Traffic အကြောင်းကိုကောင်းကောင်း သိတယ်၊
တစ်ချို့တွေ က လုံးလုံး မသိဘူး။ ကဲ မသိသေးတဲ့ သူတွေကတော့ Social site တွေ ဖြစ်တဲ့ facebook မှာ ဘာညာဘာညာ ပွားပေါ့။ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစု စသည်ဖြင့် ပြောပေါ့၊ နောက်ထပ် direct referral လွယ်လွယ် ရမယ့် နည်းလမ်း ကတေ့ာ http://www.getref.com and http://www.programrefs.com အဲဒိ ကိုသွား Register လုပ် ဘယ်လို သုံးရမှန်းမသိရင် FAQ မှာ ရှာဖတ်။
Rental Referral အကြောင်းကတော့ ရှင်းပါတယ်။ PTC site တွေမှာ Rent referral ဆိုပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Refer တစ်လိုင်းကို $0.2 နဲ့ Rent လုပ်နိုင်ပါ တယ်။ Renter referral တွေ ကဘာတွေ လည်းဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လို Member တွေပါဘဲ။ တနည်းအားဖြင့် sponsor မရှိပဲ Direct Signup Mamber တွေပါ။ တစ်ပါတ်ကို တစ်ခါပဲ ၀ယ်ခွင့် ပြု ပါ တယ် ။ မိမိ ပိုက်ဆံရှိ သလောက် ၀ယ် လို့ရပါတယ်။
PTC Strategy Guide (OR) ၀င်ငွေတိုးအောင် လုပ်နည်း ကအခုမှ စမှာပါ။
Zero Investment Strategy
ကဲကျွန်တော် Probux ကို ဥပမာပေးပြီးရှင်းပြ ပါမယ်။ ကြော်ငြာ Link တွေ အားလုံးကိုကြည့်လိုက်ပါ။
$0.06 ရပါလိမ့်မယ်။ $1.0 ရတဲ့ ထိ နှိပ်ပါ။
ရတဲ့ $1.0 ကို main balance ကနေ rental balance ထဲကို transfer လုပ်လိုက်ပါ။
rent refer မှာ refer3လိုင်း ၀ယ်လိုက်ပါ။
rented referral page မှာ AutoPay ကို Turn On လုပ်ထားလိုက်ပါ။
rental balance ထဲမှာ ပိုက်ဆံ အမြဲဖြည့်ထားပါ။
တကယ်လို့ Refer Avg Click က 2avg အောက် ရောက်နေရင်သော် လည်းကောင်း၊ inactive မဖြစ်ရင် သော်လည်းကောင်း Recycle လုပ်လိုက်ပါ။ မှတ်ချက် ၂ရက်-၃ရက်လောက်တော့ စောင့် ကြည့်သင့်တယ်။
ပိုက်ဆံ လုံးဝ မထုတ် ပါနဲ့
rent refer များဝယ်နိုင်လေ ပိုက်ဆံပိုရလေ၊ပိုက်ဆံပိုရလေ rent refer များများဝယ်နိုင်လေဖြစ်ပါတယ်။
rent refer အရေအတွက် 200 ရောက်ရင်တော့ refer ၀ယ်တာရပ်လိုက်ပါ။
ရှိ ပြီးသား refer တွေ ကို Maintain (avg ကို2ကျော်အောင်လုပ်ပါ)လုပ်ရင်းနဲ့ $70 ရတဲ့ အထိ စုပါ။
$70 ရရင် account ကို golden member ဖြစ် အောင် upgrade လုပ်လိုက်ပါ။
rent refer တွေ ဆက် ၀ယ်ပါ။ rent referအရေအတွက် အရေအတွက် အရေအတွက်အရေအတွက် 800-1000ရောက် ရင် Ultimate account ဖြစ်အောင် upgrade လုပ်လိုက်ပါ
rent refer 4000 ရတဲ့ ထိ ၀ယ်ပါ
ကဲ နောက်ဆုံ အဆင့် ကတော့ rent referal တွေကို maintan လုပ်ရင်းနဲ့ Cash out လုပ်ပေါ့ ဗျာ...........
CASH OUT AGAIN AND AGAIN
200 Referrals x $0.005 x4Ads per day = $4.00 per day (earning from rental referrals)
200 Referrals x $0.01 x4Ads per day = $8,00 per day
1000 Referrals x $0.01 x4Ads per day = $40,00 per day
2000Referrals x $0.01 x4Ads per day = $80,00 per day
4000 Referrals x $0.01 x4Ads per day = $160,00 per day ($57,600 per year)
မရှင်းတာရှိရင်လည်း Youtube မှာ video တွေရှာကြည့်လို့၇ပါတယ်။
neobux complete guide
neobux renting referral guide
probux guide , etc...................
making money free and easy
Posted 15th April by Aung Kyaw Zaw
Thet Sandi Kyawt Shin September 20, 2013 at 6:11 PM
ကျတော်လိုက်လုပ်ကြည့်တာတော့ လေ proxy ပြောင်းပြီးသွားတော့ အင်တာနက်မရတော့ဘူးဗျ ကျတော်က ဖုန်းနဲကသုံးလိုများလားမသိဘူး အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Thet Sandi Kyawt Shin September 20, 2013 at 8:04 PM
viewed this advertisement in the last 24 hours...ပြတာဘာဖြစ်လို့လဲဟင်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကိုနိုင် September 27, 2013 at 11:59 PM
အလွယ်တကူပြောရရင်တော့ မောက်ပါတဲ့ဖုန်း တိုင်းရပါတယ်ခင်ဗျာ ဥပမာ blackberry,Nokia
Android ဖုန်းတွေ မရပါ....
ကိုနိုင် September 28, 2013 at 12:02 AM
ဒီ ၂၄ နာရီအတွင်း ဒီ IP နဲ့ ဒီကြော်ငြာ ကို အခြားတယောက်ကကြည့်ပြီးသွားပြီလို့ပြောတာပါ
ကျွန်တော့်ကို တော်တော်များက မေးကြပြုကြလို့ ကျွန်တော်ရေးပါတယ်.. Commemt တွေမှာလည်းတွေ့ပါတယ်..ကူပါအုံး .. Nokia ဖုန်းကို မြန်မာဖောင့် ဘ...
Shweyoe Dictionary Version 3.0 (Windows) [Updated]
Shweyoe Dictionary Version 3.0 (Windows) [Updated] Zawmin April 4, 2013 Announcements , Dictionary , Release မင်္ဂလာပါ. ဒီတစ်ခေါက်ကတော...
ကျနော့ရဲ့ လေးစားရပါသော ဘလော့မိတ်ဆွေများအားလုံး “ မင်္ဂလာပါ ” အခုလို ကျနော့ရဲ့ဘလော့လေးကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ် နေ...